Unofanirwa kuendesa mota yako pane yakavhurika kana yakavharirwa mutakurwi? - Yangu Mota Kunze
Unofanirwa here kuendesa mota yako pane yakavhurika kana yakavharirwa mutakuri?
Kufambisa mota yako kunogona kudhura asi zvinogona kukuvara zvinokonzerwa nekuregeredza kwevanotakura mota. Kune chikamu chikuru, mota yako ingangove yakanaka pane akavhura mutakuri. Izvo zvakachipa nekuda kwechikonzero - haisi iyo 'yakachengeteka' nzira yekutumira mota yako.
Mutakuri akavharirwa anoderedza mikana yechinhu chakaipa chiri kuitika kumotokari yako. Mutengo ndiwo unotyaira kufambiswa kwemotokari yako, saka kana ikapfuura chimwe chiyero tinokurudzira kutakura kwakapoteredzwa.
Kana iyo mota iri zvakare yekunzwa iwe ungangoda kufunga nezve yakavharirwa kutakura.
Muchiitiko chisingaite chekukuvara - inishuwarenzi nekambani inofambisa mota yako zvakadaro.
Ingo rangarira kutarisa kupurinda kwakanaka kana isu tisingabatiri kupinza kwako kune muganho pamari inobhadharwa.
Tinokurudzira kusangana nekota pamusoro pekutakura mukati uye kana uri kunyoresa mota yako kuUnited Kingdom tinogona kubatsira nazvo.